AMISOM oo maanta Muqdisho ku soo bandhigeysa qorsheheeda bixitaanka kadib - Halbeeg News
MUQDISHO(HALBEEG)-Shir socon doona muddo afar cisho ah loogana hadlayo qorshaha ciidamada AMISOM uga baxayaan Soomaaliya ayaa lmaanta ka furmay magaalada Muqdisho.
Shirkaan oo ay soo qaban qaabisay AMISOM waxaa ka qeyb galaya saraakiisha ugu sarreeysa howlgalka AMISOM ee soomaaliya waxaana looga fadhiyaa in ay soo saaraan qorshe istiraatiiji ah oo tilmaamaya hannaanka ka bixitaanka AMISOM ee Soomaaliya .
saraakiishan ayaa sidoo kale soo bandhigi doona qorshe howleedka u yaalla ciidamada ee ay tahay in ay fuliyaan ka hor bixitaankooda Soomaaliya.
Ku xigeenka wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Simon Mulongo oo shirka guddoominayay ayaa tilmaamay in shirkan ay ka rajeynayaan inay ka soo baxaan go’aanno mirodhal ah oo wax lagu dhisi karo la iskuna halleyn karo. “Waxaan rajeynaya in shirkan ay ka soo baxaan go’aanno wax ku ool ah oo la isku haleyn karo,” ayuu yiri Simon. Waxaa uu intaa ku daray in wax dib u dhac ah uusan ku imaan doonin howlgallada haatan socda.
Taliyaha guud ee ciidamada AMISOM Tigabu Yilma Wondimhunegn oo hadlay ayaa isna sheegay in howlgalkooda cusub xooggiisa ay ku bartilmameedsan doonaan al-Shabaab si loo dhimo cududdooda iyo guud ahaanba dhaqdhaqaaqa kooxda oo ka tilsa qeybo ka mid ah dalka.
Dabayaaqada bishan ayaa lagu wadaa in kun askari oo ah qeybihii ugu horreeyay ee ka tirsan ciidama AMISOM in laga saaro Soomaaliya.
Maamulka Hirshabeelle ayaa dhawaan walaac ka muujiyay qorshe maamulkaas looga saarayo kun askari oo ka socda Burundi, iyadoo deegaannada ciidamadan ay banneeynayaan ay ka mid yihiin deegaannada Cadale iyo Raage Ceelle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe.